माधव पक्षमा विभाजनको रेखा, कुन कुन नेताले छोड्दैछन् नेपालको साथ ? – Kantipur Np
माधव पक्षमा विभाजनको रेखा, कुन कुन नेताले छोड्दैछन् नेपालको साथ ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ०२, २०७८ समय: १८:२०:२१
सरकार टिकाउन ‘निर्णायक’ मानिएको नेपाल पक्षमा विवाद सुरु भएको छ । सर्वोच्चले शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने वातावरण बनाए पछि अब देउवालाई विश्वासको मत दिने की नदिने भन्ने विषयमा विवाद सुरु भएको हो । खासगरी नेपाल आफैले सदस्य बनाएको कार्यदलमा भएका नेताहरु प्रति शसंकित भएका छन् ।
एमालेमा विवाद आएपछि एकताको प्रयासमा रहेका कार्यदलका नेताहरु पछि सम्म पनि ओलीसंगको बार्तामा रहेका कारण नेपाल उनीहरुसंग शसंकित भएका हुन् । देउवालाई विश्वासको मत दिने की नदिने भन्ने विषयमा पनि नेपालले कार्यदल बाहेकका नेताहरुसंग गोप्य कुराकानी गरेको बुझिएको छ ।
अदालतको फैसलासम्म एक ढिक्का रहेको नेपाल समूहभित्र अब देउवाको सरकारलाई विश्वासको मत दिने–नदिनेमा विवाद उत्पन्न भएको हो।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब एमालेमा माधव नेपालका लागि ठाउँ छैन भन्दै अभिब्यक्ति दिएपछि एकताको ढोका माधवका लागि बन्द भएको देखिन्छ । ओली अब कुनै पनि हालतमा नेपाललाई एमालेमा भित्र्याउने पक्षमा छैनन् ।
तर दोस्रो तहका नेताहरु भने पार्टी एकता भन्दै ओली पक्षका नेताहरुसंग छलफलमा रहेका कारण नेपाल कार्यदलका नेताहरु प्रति शसंकित भएका हुन् । योगेश भट्टराईले यसअघि नै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर समेत गरेका छैनन् ।
उनले अन्य नेताहरुलाई पनि देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर नगर्न भनेका छन् । नेपाल पक्ष देउवालाई विश्वासको मत नदिएमा नैतिक र राजनीतिक सङ्कटमा पर्नेछ।
शुक्रवार नै ओलीले स्थायी कमिटीको बैठक राखेर देउवा सरकारलाई विश्वासको मत नदिने बताएपछि नेपाल पक्ष थप समस्यामा परेको हो । एक सय २३ सांसद रहेको सत्ता गठबन्धनलाई एमालेको नेपाल पक्षले विश्वासको मत दिने र सरकारमा पनि सहभागी हुने अपेक्षा देउवाले गरेका छन्। कोटेश्वरमै पुगेर देउवाले नेपालसंग आफ्ना पक्षमा मत मागेका छन् ।
देउवालाई समर्थन गर्ने २३ सांसद विश्वासको मतका लागि निर्णायक भूमिका हुने भएकाले दुवै शीर्ष नेताले नेपाललाई सत्ता गठबन्धनमै राखिराख्ने कोसिस जारी राखेका छन्। तर एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल लगायतका नेताहरू त्यति बेलासम्म पार्टी एक बनाएर लैजाने पक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ।
‘भीम रावलहरूले धोका दिने अवस्था आएमा नेपाल पक्षमा रहेका सांसदहरू पनि घट्ने देखिएको छ । रावल जस्तै सुरेन्द्र पाण्डे सलगायत कार्यदलमा रहेका नेताहरूले देउवालाई विश्वासको मत नदिन सक्ने सम्भावना रहेकाले पनि नेपाल संकटमा परेका हुन् ।
बुधवार मात्रै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै विश्वासको मत दिन र सरकारमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालसँग भेटवार्ता गरेका थिए। बिहीबार सोही विषयलाई लिए
Last Updated on: July 17th, 2021 at 6:20 pm